ग्यास्ट्राइटिस छ ? भुलेर पनि नखानुस् यी खाना – Medianp
ग्यास्ट्राइटिस छ ? भुलेर पनि नखानुस् यी खाना
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: बिहिबार, जेठ ३१, २०७५०८:०४0
नेपालीमा ग्यास्ट्रिकका रूपमा प्रचलित भए पनि यस्तो समस्याको खास नाम ग्यास्ट्राइटिस हो । जसको अर्थ पेटको भित्री भाग सुन्निनु, ग्यास बढ्नु भन्ने हुन्छ । यो नेपालीको आमसमस्या हो । यस्तो समस्या भएमा पेट फुल्ने, हावा भरिएको अनुभूति हुने, खानेकुरा राम्ररी नपच्ने, लामो समय नखाँदा पेट पोल्ने, खान मन नलाग्ने, ढ्याउ आइरहनेलगायत समस्या हुन्छन् ।
पौडेल समूहलाई ठेगान लगाउन देउवाले जन्माए अर्को समूह
सावधान ! गर्भावस्थमा भुलेर पनि नगर्नुहोस् यी १० गल्ती